Mara Bran Castle | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | General, Ihe ị ga-ahụ, Romania
O doro anya na ochie castles ha bụ ihe kwesịrị ileta. Ọtụtụ abatala n'oge anyị ma n'eziokwu, kemgbe ọtụtụ narị afọ, ọtụtụ ndị ọzọ efuola. Oge, mbibi, agha ma ọ bụ nleghara anya egbuola ọtụtụ n'ime ha.
Mana ole na ole anwụghị n'ihi akụkọ, akụkọ ihe mere eme na njem. Na Romania, dịka ọmụmaatụ, enwere ọtụtụ ebe ewusiri ike ochie mana ị ga-ahụ otu n'ime ụlọ ochie ndị ama ama na ụwa: ihe Ogige Bran. Ọ bụ ya Lọ Dracula? Ee, agwa sitere na akwụkwọ akụkọ Bram Stoker.
1 Ebe bụ Bran Castle
2 Gaa na Castle Bran
3 Ozi bara uru banyere nleta ahụ
Ebe bụ Bran Castle
Nke a nnukwu ulo Ọ bụ n'ọnụ ụzọ nke Rucar - Bran dị na ntụgharị na ụzọ nke jikọtara obodo Brasov na Campulung. Ejiri ugwu elu Piatra Craiului na Bucegi chọọ elu mma mma.
Ebe dị anya n’etiti Bran na Brasov anaghị akarị kilomita iri atọ na n’agbata Bran na Bucharest, e nwere ihe na-erughị narị kilomita abụọ ya mere ị nwere ike ịga ebe ahụ ngwa ngwa. Ọbịbịa nke nnukwu ụlọ bụ naanị otu akụkụ nke ụzọ njem nleta nke kwesịrị igosipụta ọdịdị nke mpaghara ahụ, yana ugwu ugwu, ọhịa ndị na-acha akwụkwọ ndụ n'èzí oge oyi, mbara ala, ndagwurugwu ndị Osimiri ...
Car nwere ike iru ụgbọ ala, ụgbọ oloko, tagzi na bọs. Ọ bụrụ na ị gaa na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke Bran Castle ị ga-ahụ ụzọ ụgbọ ala Bran-Brasov na Bran-Bucharest na map. Ọ na-akọwapụta ọnụ ọgụgụ nke ụzọ eji eme ihe, ọnụọgụ nke kilomita iji gaa na oge ruru nke njem ahụ. Ọ bụrụ na ị jiri ụgbọ oloko ị nwere ike isi na Bucharest gaa Brasov site na iji ụgbọ oloko mba site na ọdụ Nord Gara A. traingbọ oloko ahụ na-ahapụ oge elekere, na Intercity Regional CFR, tiketi ahụ na-efu ihe dị ka euro 10 karịa ma ọ bụ obere ma na-akwụ ụgwọ ihe dị ka atọ awa na ọkara.
Gbọ oloko ahụ batara na Brasov ma site ebe a ị ga-eji bọs ma ọ bụ tagzi. N’ime ihe kariri nkeji iri anọ na ise ị rutere Bran. Enwere bọs oge niile ọkara ọkara ọ bụla na awa ọ bụla na ngwụsị izu. Tiketi akwụ ụgwọ 45, 1 euro. O doro anya na ị nwekwara ike were tagzi ma site na Bran ruo na nnukwu ụlọ na site na Bucharest. N’okwu nke ikpeazụ, njem ahụ bụ awa abụọ na ọkara ma ị ga-akwụ ụgwọ ihe ruru euro 50, 80. Site na Brasov njem ahụ dị ọnụ ala, ihe dịka euro 90.
Gaa na Castle Bran
En nnukwu oge (site n’April 1 rue Septemba 30), oge ndị nnukwu ụlọ bụ Mọnde site na 12 ruo 6 elekere na Tuesday ruo Sọnde site n’elekere 9 nke ụtụtụ ruo elekere isii nke mgbede Ntinye ikpeazụ bụ na 6 pm. Gbanye obere oge (bido n’Ọktoba 1 rue Machị 31), mechie elekere abụọ tupu mgbe ahụ, n’elekere anọ nke ehihie.
Nnukwu ụlọ meghere arụzigharị na 2009 yana obodo nta nke Bran, ha bụ ndị protagonist nke njegharị ndị njem na mpaghara ahụ nyere nnukwu aka mmepe nke akụ na ụba mpaghara. Ọchịchị Ceausescu jichiri ihe onwunwe ma na mbido narị afọ ọhụrụ ọtụtụ ndị ezinụlọ Romania ọdịnala rịọrọ steeti ahụ maka nloghachi ha. E nyefere Bran Castle n'aka ndị otu ezinụlọ Habsburg.
Taa nnukwu ụlọ ọ bụ ihe ngosi nka nke onwe na ọgaranya nchịkọta nke nkà na arịa ụlọ nke Queen Mary. Ekele maka mweghachi ndị na-aga n'ihu, nnukwu ụlọ nwere ike na-enwu taa na ịma mma ya niile. Queen Mary kpọrọ ya "obere ebe e wusiri ike" n'ihi ya, ọ bụ ihe na-adọrọ mmasị n'ezie: kọmpat, na ramp, ụlọ elu na mgbidi. Ihe niile mara mma nke Carpathians na doro anya, akụkọ banyere Dracula na-eme ọtụtụ ihe iji wulite ya.
Obodo nta dị n'ụkwụ ya na-arụkwa ọrụ dị ka N'èzí ihe ngosi nka. Ọ na-egosiputa ụfọdụ ihe atụ 18 nke ụlọ ụlọ ọdịnala Rom, ọtụtụ ejiri osisi, ọtụtụ igwe mmiri na ihe ndị ọzọ. Ọ bụ ọmarịcha ije na akụkọ ntolite.
Anyị ga-asị na ọ bụ ezie na nnukwu ụlọ ahụ na onye ọchịchị akụkọ ihe mere eme nke Wallachia jikọtara ya Onweghị ihe a pụrụ ịdabere na ya nke na-eme ka Dracula dịrị n'otu. Ọ ga-abụrịrị na ọ bịara ebe a oge ụfọdụ mana enweghị ndekọ banyere nleta ya. Anyị ga-echetakwa na Bram Stoker, onye edemede Irish nke Dracula, etinyeghị ụkwụ na Central Europe na mmepe niile nke agwa ya bụ akụkọ ifo.
Imecha m na-agwa gị na ị nwere ike nọrọ ezumike na Bran Castle ma ọ bụ nnukwu echiche. Onye njem ahụ nyere iwu ka otu nwoke yi uwe dị ka Vlad, onye na - egbu osisi na ọ bụ ya na - akpọrọ gị banye na nnukwu ụlọ ochie a, na - akọgharị mmeri ya, agha ya na ee, osisi. Ime ụlọ niile gbakwunyere na patio ebe vodka na mmanya na-eje ozi ebe dị anya, anụ ọhịa wolf nwere ike ịnụ mkpu.
Nleta nke isiokwu ha na-ejedebe na ihe nke oge a, ụdị emechaa n’otu nnukwu ụlọikwuu e guzobere n’ala ala ebe e wusiri ike, ebe a ga-eso ndị ọzọ ndị ọzọ gaa Halloween ebe ahụ, ha niile ejikere. Werewolves, Draculae ebe niile, ụmụ nwanyị di ha nwụrụ dị omimi na ihe ọ bụla ị nwere ike iche. N'ezie, ọ bụrụ na ịgaghị October enwere mmemme ndị ọzọNaanị ile anya na ebe nrụọrụ weebụ iji hụ ihe omume akwadoro.
Dịka ọmụmaatụ, maka ndị a Ista enwere ihe omume nke bidoro na abali iri-abuo n’ime onwa iri-abuo wee puo n’abali iri-n’ise nke onwa iri-na-isii. Ma ọ bụ, ihe omume ọzọ bụ nke akpọrọ Tunnel of Time na nnukwu ihe ngosi multimedia.
Ozi bara uru banyere nleta ahụ
Tiketi akwụ ụgwọ LEI 40 kwa okenye, 30 maka ndị mmadụ karịa 65, 25 maka ụmụ akwụkwọ na naanị 10 maka ụmụ akwụkwọ ụlọ akwụkwọ. Ntuziaka ọdịyo (na Bekee, French, German, Italian, Russian, Hungarian na Spanish) na-eri LEI 10 na mgbe ọ gasịrị ị na-akwụ ụma maka ọnụ ụzọ nke ngosipụta ọ bụla ọpụrụiche. Iji maa atụ, 10 LEI extra for Exposure of Torture per adult.
La zụta tiketi ị nwere ike ime ya n'ịntanetị afọ niile.
Echefula ileta ụlọ Tea, ụlọ mara mma ma nụchaa ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị Ememe Halloween A na m agwa gị ka ị mee ọsọ ọsọ maka na ọ bụ oke osimiri nke ewu ewu ma ị ga-ama etu esi eji ejiji. Ndị ọzọ, dịka ọ toro na ewu ewu, agbasasịwo iche: taa ọ na-enye njem nlegharị anya ruo etiti abalị nke na-efu LEI 70 maka okenye na nnukwu oriri nke na-amalite ma mechaa na chi ọbụbọ. Oge mmemme a bụ naanị maka ndị gafere afọ 18 na-akwụ 180 LEI, mana ọnụahịa ahụ gụnyere njem abalị nke nnukwu ụlọ.
Ma ọ bụrụ na ịchọrọ iri nri, ọnụahịa menu bụ 450 LEI ọzọ. Njem Na-atụ ụjọ na-amalite na 7 elekere na mgbede ahụ na-amalite na 9 pm na ụlọ oriri na ọ restaurantụ ofụ nke Tea House. Naanị ị ga-akwụ ụgwọ ma yikwasị uwe gị kachasị mma. Echefughi !!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Mara Bran Castle